Inqubomgomo yamakhukhi – Amathiphu we-Android Cheats
Le Nqubomgomo Yamakhukhi ichaza ukuthi ayini amaKhukhi nokuthi siwasebenzisa kanjani. Kufanele ufunde le nqubomgomo ukuze Uqonde ukuthi hlobo luni lwamakhukhi Esiwasebenzisayo, noma ulwazi esiluqoqa sisebenzisa amakhukhi nokuthi lolo lwazi lusetshenziswa kanjani. Le Nqubomgomo Yamakhukhi.
Ngokuvamile amakhukhi aqukethe noma yiluphi ulwazi olukhomba umsebenzisi uqobo, kodwa imininingwane yomuntu esiyigcina mayelana nawe ingaxhunyaniswa nemininingwane egcinwe ngaphakathi futhi itholakale kuma-Cookies. Ngeminye imininingwane yokuthi Sisebenzisa kanjani, gcina futhi ugcine imininingwane yakho ephephile, bona Inqubomgomo yethu Yobumfihlo.
Asigcini imininingwane yakho ebucayi, njengamakheli okuposa, amaphasiwedi we-akhawunti, njll. kumakhukhi esiwasebenzisayo.
Amagama incwadi yokuqala efakwa kuwo ngofeleba anezincazelo ezichazwe ngaphansi kwezimo ezilandelayo. Lezi zincazelo ezilandelayo zizoba nencazelo efanayo kungakhathalekile ukuthi zivela kubunye noma kubuningi.
Ngezinhloso zale Nqubomgomo Yamakhukhi:
Inkampani (okukhulunywe ngakho noma “Inkampani”, “Thina”, “Us” noma “Okwethu” kule Nqubomgomo Yamakhukhi) kubhekiswa ekusekelweni kweMidlalo Yeselula, pitagorasa 16.
Amakhukhi kusho amafayela amancane abekwe kwikhompyutha yakho, umakhalekhukhwini noma enye idivayisi ngewebhusayithi, equkethe imininingwane yomlando wakho wokuphequlula kuleyo webhusayithi phakathi kokusebenzisa kwayo okuningi.
Iwebhusayithi isho Amathiphu we-Android Cheats, kufinyeleleka kusuka ku-https://mobilecheats.edu.pl
Wena kusho umuntu ongena noma osebenzisa iWebhusayithi, noma inkampani, noma yinoma iyiphi inhlangano esemthethweni lowo muntu angena noma asebenzisa iWebhusayithi, njengoba kusebenza.
Uhlobo Lwamakhukhi Esiwasebenzisayo
Amakhukhi angaba njalo “Ukuphikelela” noma “Iseshini” Amakhukhi. Amakhukhi aqhubekayo ahlala kwikhompyutha yakho noma kudivayisi yakho ephathekayo lapho ungaxhunyiwe ku-inthanethi, ngenkathi ama-Session Cookies esuswa ngokushesha nje lapho Uvala isiphequluli sakho sewebhu.
Sisebenzisa womabili amaKhukhi weseshini nokuphikelela ngezinhloso ezibekwe ngezansi:
Kuyadingeka / Amakhukhi abalulekileThayipha: Amakhukhi Eseshini Alawulwa ngu-: UsUkuhlose: Lawa makhukhi abalulekile ukukunikeza izinsizakalo ezitholakala ngeWebhusayithi nokukunika amandla okuthi usebenzise ezinye zezici zawo. Basiza ukugunyaza abasebenzisi futhi bavimbele ukusetshenziswa kwenkohliso kwama-akhawunti womsebenzisi. Ngaphandle kwalawa makhukhi, amasevisi owacelile awakwazi ukunikezwa, futhi sisebenzisa lawa makhukhi ukukunikeza lezo zinsizakalo.
Ukusebenza AmakhukhiThayipha: Amakhukhi Aqhubekayo: UsUkuhlose: Lawa makhukhi asivumela ukuba sikhumbule izinqumo ozenzayo lapho usebenzisa iWebhusayithi, njengokukhumbula imininingwane yakho yokungena noma okuncamelayo kolimi. Inhloso yalawa makhukhi ukukunikeza okuhlangenwe nakho komuntu siqu nokukugwema ukuthi uphinde ufake okuthandayo ngaso sonke isikhathi lapho usebenzisa iwebhusayithi.
Izinketho zakho maqondana namakhukhi
Uma ukhetha ukugwema ukusetshenziswa kwamaKhukhi kwiWebhusayithi, okokuqala Kumele ukhubaze ukusetshenziswa kwamakhukhi esipheqululini sakho bese ususa amakhukhi agcinwe kusiphequluli sakho esihlotshaniswa nale webhusayithi. Ungasebenzisa le nketho ukuvimbela ukusetshenziswa kwamakhukhi nganoma yisiphi isikhathi.
Uma ungawamukeli amaKhukhi ethu, Ungahle ubhekane nokuphazamiseka ekusebenziseni kwakho Iwebhusayithi futhi ezinye izici kungenzeka zingasebenzi kahle.
Uma ungathanda ukususa ama-Cookies noma uyale isiphequluli sakho sewebhu ukuthi sisuse noma senqabe ama-Cookies, sicela uvakashele amakhasi osizo wesiphequluli sakho sewebhu.
Okwesiphequluli sewebhu se-Chrome, sicela uvakashele leli khasi kwa-Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Okwe-browser ye-Internet Explorer, sicela uvakashele leli khasi kwa-Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
Okwesiphequluli sewebhu seFirefox, sicela uvakashele leli khasi kusuka eMozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Okwesiphequluli sewebhu seSafari, sicela uvakashele leli khasi kusuka ku-Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Noma yisiphi esinye isiphequluli sewebhu, sicela uvakashele amakhasi ewebhu asemthethweni wesiphequluli sakho sewebhu.
Uma unemibuzo mayelana nale Nqubomgomo Yamakhukhi, Ungaxhumana nathi:
Ngenombolo yocingo: 487-987-4874
Ngeposi: pitagorasa 17, I-New York, 10001, iziwe Ezihlangene